जिन्दगी आफैमा निकै प्यारो छ, यसको ख्याल गर्नु – नेपाली संगसार
नेपाली संगसार calendar_today २१ माघ २०७७, 7:40 am
जिन्दगी आफैमा यति प्यारो छ कि तर के गर्नु कहिलेकाही अरुको मायाको पनि आवश्यकता पर्दोरहेछ जिउनुलाई!
सबैभन्दा पहिला आफुले आफैलाई मायाप्रेम गर ,त्यसपछि मात्र तिमिले सकारात्मक सोचाइहरु ल्याउनु सक्छौ!
माया र दयाको अभावमा रहेकाहरुलाई माया दिनु सक्नु शिक्षा दिन्नु सम्मान हो!
सम्बन्ध एकदमै नाजुक हुन्छ यसलाइ कहील्यै अंहकारले नाश नगर!
मान्छेलाई घृणा गर्ने सिर्जना उसको सुन्दर अनुहारले होइन उसको ब्यवहारले गराउनेछन्!
बिश्वास पनि जिन्दगीको एउटा ऎना जस्तै हो, जो एकचोटी फुटेपछि कहिल्यै जोडीदैन!
बुद्धि नहुनेहरु बल देखाउछन भने, बुद्धि हुनेहरु दिमाग लगाउछ्न!
संसारको समस्या यहीँ हो ,मान्छेले समाज बदल्ने कुरा गर्छ ~ ठुलो आवाजमा, तर आफू चाहिँ जस्ताको जस्तै!
जिन्दगीलाई यति धेरै सस्तो पनि कहिल्यै नबनाउनुहोस् किनकी कुनै पनी घटिया,अन्जान मान्छेले बाटोमा खेल सम्झी खेलेर जाओस्!
मान्छेको तागत र शत्ती हेरेर होइन उसको बुद्धि र बिचार हेरेर काम गर्नुहोस्!
केही गर्ने सोच राख्ने मान्छेलाई यो संसारमा केही पनि असम्भव छैन!